Ampamoaka : “Mikorontana tanteraka ny fitantanana ny Cua” -
AccueilRaharaham-pirenenaAmpamoaka : “Mikorontana tanteraka ny fitantanana ny Cua”
03/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Vaky bantsilana. Tsy nitsitsitsitsy fitenenana ny mpanolotsain’ny tanànan’Antananarivo, Lalatiana Ravololomanana, omaly teny Ivandry, nanoloana ny mpanao gazety mikasika ny fitantanana ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Karazana ampamoaka mihitsy no nataony tamin’izany satria maro ireo nokianiny mahakasika ny fitantanana, indrindra fa ny fitantanam-bola, nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety.
Nanambara ity mpanolotsaina monisipaly iray ity, fa ataon’ny Ben’ny tanàna mivady, Lalao Ravalomanana, sy ny ekipany ary ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) fitaovana fitadiavam-bola ny Kaominina Antananarivo Renivohitra. Izany hoe, ataon’ny Ben’ny tanàna miaraka amin’ny mpanolotsainy manokana, izay tsy iza fa ny vadiny ihany, Marc Ravalomanana, fitadiavam-bola hanomanana ny fifidianana Filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ny fanomezana ireo fananan’ny CUA hotantanin’ny orinasa tsy miankina. Noho izay indrindra, nanambara ramatoa Lalatiana Ravololomanana fa tsy manaiky, na oviana na oviana, ny fanaovan’ny Ben’ny tanàna mivady sy ny ekipany tantely afa-drakotra ny fananam-bahoaka eto Antananarivo izy ireo. “Tsy ny fanomanan-dRavalomanana ny firontsahan-kofidiany ho Filoham-pirenena amin’ny 2018 akory no handoavan’ny mponin’Antananarivo hetra isan-karazany. Mila asa mivaingana sy fanatsarana ny tanàna hita maso ny vahoaka”, hoy izy nanamafy.
Manjaka ny kolikoly
Ankoatra izay, nanizingizina ihany koa i Lalatiana Ravololomanana fa tsy misy mandeha amin’izay laoniny intsony ny fitantanana ny CUA. Nambarany fa ratsy tantana ny tanànan’Antananarivo Renivohitra satria hanjakan’ny kolikoly, ny gaboraraka, ny akamakama, sns, ary hita taratra amin’izany fa tsy misy mihitsy ny mangarahara, indrindra eo amin’ny fitantanam-bola. Voalaza mantsy fa mbola tsy nolaniana teo anivon’ny fivoriamben’ny mpanolotsaina monisipaly mihitsy ny tetibolam-piasan’ny CUA, taona 2016 sy 2017. Mbola tsy nodinihina ihany koa anefa ny tetibola taona 2018. Olana ihany koa, raha ny fanazavana hatrany, ny tsy fahamatoran’ny “organigramme”, izay efa inefatra novaina tao anatin’ny roa taona. Manaraka izany, ny fanomezana seza sy toerana ireo olona namana akaiky ny mpitantana, ka namoronana sampandraharaha hafa mihitsy teo anivon’ny CUA, sns. Manginy fotsiny ny tsy fisian’ny tatitra ara-bola, miditra sy mivoaka, izay tokony ataon’ny Ben’ny tanàna mikasika ny fitantanana ny tsena, izay tena mampidi-bola betsaka amin’ny kaominina, ny fitantanana ny fiantsonan’ny fiara, sns. Noho izay indrindra, fantatra fa manjaka ny kolikoly sy ny gaboraraka eo anivon’ny fitantanana ny tanàna.
Miantso ny IGE sy ny Bianco
Etsy andaniny, raha mikasika ny orinasa Easy Park, mitantana ny fiantsonan’ny fiara eto an-drenivohitra indray, dia nanambara ity mpanolotsain’ny tanànan’Antananarivo ity fa efa nalain’ny CUA tany amin’io orinasa io avokoa ny vola tokony hirotsaka ao amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina. Izany hoe, 74%-n’ny vola miditra an’ny Easy Park, ary ny 20% no mirotsaka ao amin’ny CUA. Tsy hita popoka anefa io 20% tokony hirotsaka ao amin’ny kaominina io satria efa nisy naka an-tsokosoko tany amin’ny orinasa Easy Park. Toraka izany koa ny hofan-tsena sy ny haban-tsena, izay tsy misy tatitra mahakasika azy ireny. Manampy izany ny vola azo tamin’ny hetsika fanomezana taratasy fahazoan-dalana manorina trano (permis de construire) izay nahatratra 3 400 ny antontan-taratasy voaray, ary nangalan’ny CUA vola mitentina 200 000 Ar avy ireo nanao fangatahana ireo.
Manolona izany indrindra, dia mamerina miantso ny fidinan’ny Inspéction Générale de l’Etat, na IGE hanatanteraka fanadihadiana mahakasika ny fandaniana sy ny fitantanana ara-bola eo anivon’ny CUA izy ireo, raha toa ka efa nanao izany fangatahana izany ny 2 desambra 2016. Toraka izany koa ny fanaovana antso avo amin’ny Bianco mba hijery marina ny zava-misy mahakasika ny fitantanana ara-bola izay hanjakan’ny kolikoly tanteraka.
Tsy an’ny CUA ny Omavet
Mahakasika ny orinasa tsy miankina Omavet izay mahatonga ny ady eo amin’ny CUA sy ny Fikamban’ny taxi indray, nanambara mazava i Lalatiana Ravololomanana fa tsy an’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra velively io orinasa io. Nohamafisiny fa raha toa ka an’ny kaominina io Omavet io, tokony nananganana sampandraharaha manokana eo anivon’ny CUA mitovy amin’ireo sampandraharaha hafa efa misy eo anivony mba tsy hampiteraka resabe etsy sy eroa. Voaporofo ny fisian’ny akamakama sy ny kolikoly tamin’ny nanomezana ny fitantanana ny ivon-toeram-pistirihana fiara eny Antsakaviro ny orinasa tsy miankina Omavet. Noho izay indrindra, tsy manaiky hatramin’ny farany ny fanomezana ireo fananan’ny CUA ny orinasa tsy miankina ny mpanolotsaina monisipaly, Lalatiana Ravololomanana. “Tapitra omena ireo orinasa tsy miankina avokoa ny mba fananan’ny kaominina satria misy aferafera ao ambadik’izany rehetra izany. Noho izany, mitsipaka ny fanomezana ny fananana iombononana ny tsy miankina izahay”, hoy izy nanamafy.
Tsy misy ambonin’ny lalàna. Izay no azo ilazana ny fahatrarana ny bolabolan’andramena avy eto Madagasikara tany Singapour. Araka izany, niakatra fitsarana tany Singapour ny raharaha fanondranana an-tsokosoko andramena avy eto Madagasikara, ny 30 Marsa teo. ...Tohiny